ပီတိ: Domain name changed
Domain name ပြောင်းတာကို ဒီကို စာလာဖတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ သတိထားမိတာရှိသလို၊ သထိမထားမိတာလဲ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ Blog Spot ရဲ့ sub-domain ဖြစ်တဲ့ peti31 ကနေပြီ ကိုယ်ပိုင် Domain pti31 ကိုပြောင်းလိုက်တာပါ။ သတိတောင်မထားမိဘူး ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ peti31.blogspot.com သွားရင်လည်း pti31.com ကို သူ့အလိုလိုပြောင်းသွားပေးတာမို့ သတိမထားလောက်ဘူးပေါ့။ အဲဒါကြောင့်လည်း သတိထားမိအောင်ရေးတာပေါ့နော်…. :P
ဘာလို့ PeTi31 ကနေ ပြီးတော့ PTi31 ဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ ဘလော့ကို ပထမအဆုံးအကြိမ်လာလည်တဲ့အခါ Pe Ti ကို ကြည့်ပြီး ပေသီး လို့ထင်တဲ့လူကထင်၊ ပေတိလို့ အသံထွက်တဲ့လူကထွက်၊ PeT ဆို စာလုံးပြောင်းတဲ့လူကပြောင်း ဆိုတော့ PTi ဆို ရှင်းသွားမယ်ထင်လို့ပါ။ နောက် သူငယ်ချင်းတယောက်အကြံပေးပါသေးတယ် pt31.com ဆိုပိုကောင်းတာပေါ့တဲ့၊ နောက်ကျသွားတော့ သူများယူသွားပြီး ကျွန်တော် ၀ယ်လို့မရတော့ဘူးလေ…
ဘာလို့ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး ကိုယ်ပိုက် domain ၀ယ်တာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်အမေကို ရေးတာလေးတွေ အချိန်နဲ့တပြေးညီ (မြန်မာသတင်းစာတွေထဲက စာလုံးပါ) ဖတ်စေချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော် စာရေးဖြစ်လား၊ ဘာတွေရေးလဲ အမြဲသိချင်တဲ့ အမေ့အတွက် ၀ယ်လိုက်တာပါ။
ပြောင်းလိုက်တော့ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ http://getsatisfaction.com/outbrain ကနေ ယူထားတဲ့ rating က အရင်ပေးထားခဲ့တာတွေပျောက်သွားတာပါပဲ။ အဲဒါနဲ့ သူတို့ရဲ့ Support ကိုမေးကြည့်တော့ domain အဟောင်းနဲ့ အသစ် ကိုပေးပါ သူတို့ပြောင်းပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခုအထိတော့ မပြောင်းသေးပါဘူး။ EOT ကိုတော့ မပြောင်းထားရသေးပါဘူး။ Domain ပြောင်းတော့ EOT ကိုလည်း အသစ်လုပ်မှရမှာပါ။ အခု ဘလော့ကို ပုံမှန်အတိုင်းမြင်နေရတာကတော့ ဇော်ဂျီဖောင့် ရှိနေလို့ဖြစ်မှာပါ။
ဘလော့ကို ပုံမှန် လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ လိပ်စာကိုပြောင်းမှတ်ပေးပါ နော်…
Peti ပဲ ဖြစ်ဖြစ် PTi ပဲဖြစ်ဖြစ် ပီတိကတော့ ပီတိ ပါပဲ….
Posted by P.Ti at Saturday, June 28, 2008
ပီတိကတော့ အမြဲ ပီတိဖြစ်နေမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ၃၁ကတော့ အမြဲ ၃၁ မဟုတ် ။ အဲဒါက ဘာလို့ပါရသေးတာတုန်း ။
၃၁ကိုပဲ လာ ခလုတ်တိုက်နေတာ ။
As the new owner of pti31.com, please accept the reader(s) hearty congratulations and very best wishes for your success...boss PT~ *wink*
so rich wah..can own domain de! :P
nway, happy thatanew name for ur "baby" is here. ..so we send you blessings, love and lots of cheer!
way to go..not jus 31..but many more..to go!!! :P
yps: i agree with ma jit!
stil 31 la?not..30++..
အဟဲ… အမြဲ ၃၁ ပဲ ဖြစ်ချင်လို့ ၃၁ပါထည့်ထားတာပေါ့။ တကယ်တော့ ၃၁လို့တောင် မထင်ရပါဘူးနော်… :P
I am not rich… but I just bought the domain name, so my mom can read it without proxy… ;)